नगरपालिकाको लगानी बालुवामा पानी सरह, डबल लागतमा बने हावाले लडाउने पिल्लर !
मुख्य पृष्ठप्रदेश समाजनगरपालिकाको लगानी बालुवामा पानी सरह, डबल लागतमा बने हावाले लडाउने पिल्लर !
साउन १०, सुनसरी, सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका वडा नं. १० स्थित रामधुनी सामुदायिक वनमा तयार गर्न लागिएको पिकनिक स्पोर्टमा गरेको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ ।
नगरपालिकाको २ वर्षीय योजनामा राखेर निर्माण गरिएको सो योजनाको पहिलो वर्षको वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ८ लाख र रामधुनी सामुदायिक वनबाट ४ लाख गरी कूल १२ लाख रकम भने लगानी भइसकेको छ । तथ्यांकगत रुपमा १२ लाख लगानी देखिएपनी नगरपालिकाले दिने ८ लाखमा करकट्टी गरी कूल ७ लाख ५५ हजार तथा वन उपभोक्ता समितिबाट ४ लाख भनिए पनी निकासा गरिएको रकम ३ लाख गरी कूल १० लाख ५५ हजार सो योजनामा खर्च भइसकेको छ ।
उक्त रकमबाट पिकनिक स्पोर्टमा सिमेन्ट पिल्लर लगाउने र तारबार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्माण समितिका अध्यक्ष पोषराज भट्टराईले दिएको जानकारी अनुसार कूल लगानी गरिएको रकम १० लाख ५५ हजारमध्ये लगभग ६ लाख ५० हजार रुपैँया तारबार गर्न र ४ लाख ५ हजार रुपैँया सिमेन्टका पिलर निर्माणमा लगानी गरिएको छ ।
यसरी ४ लाखको लगानीमा ३ सय ७८ वटा सिमेन्टका पिल्लरको तयार गरिएको उक्त योजनाका ठेकेदार प्रेमबहादुर बिष्टले बताए । निर्माणमा आवश्यक पर्ने सामाग्री खरिदसहित सरसर्ती हेर्दा ३ सय ७८ वटा पिल्लर निर्माणमा ४ लाख ५ हजार खर्च भएको छ । सो खर्च भने प्रतिपिल्लर १ हजार ७२ रुपैंया पर्ने देखिन्छ । त्यसोतः ठेकेदार कम्पनीले सोझै प्रतिपिल्लर यतिनै रकम परेको भनेर देखाएको छैन । ठेकेदार तथा निर्माण समितिका अनुसार सिमेन्ट, बालुवा र गिटी खरिद गरेर मजदूरहरुलाई प्रतिपिल्लर २ सय ५० का दरले निर्माण गर्न लगाएको बताएका छन् । ५ इन्च गोलाई र ५ फिट उचाइका ती पिल्लरहरु ३ सय ७८ वटा तयार गरिए पनि ३८ वटा नाजुक भएको भन्दै ३ सय ४० वटा भने हाल तयार गरेर गाडिएको छ ।
यसरी जमिनमा गाडिएका ६० प्रतिशत पिल्लरहरु यति नाजुक छन् की भनिसाध्य छैन । ती पिल्लरहरु हातले सामान्य ढङ्गलेनै उक्काउन सकिन्छ । अर्को विचित्र लाग्ने पक्ष के पनि छ भने गाडेकै ठाउँमा पिल्लरहरु हावाले भाँचीदिएको छ । यसैलेनै पिल्लरको स्थिती कस्तो होला भनेर झल्काउँछ । ३ वटा रडको प्रयोग गरिएका ती ३ सय ७८ वटा पिल्लरमा जम्मा ६० बोरा सिमेन्ट प्रयोग गरिएको समिति बताउँछ । त्यत्रो परिमाणमा पिल्लर तयार गर्दा ६० बोरा मात्र सिमेन्ट प्रयोग हुनुले पनि त्यसको स्तरियता कस्तो भनेर छर्लङ्ग पार्दछ ।
अर्को रोचक पक्ष के पनि छ भने पिल्लर उद्योग कम्पनीहरुले प्रतिपिल्लर १ सय १० प्रतिफुटका हिसाबले पिल्लरहरु विक्री गरिरहेको बताउँछन् । उनिहरुले विक्री गर्ने दररेटका आधारमा ती पिल्लरहरु प्रतिगोटा ५ सय ५० रुपैँयामा तयार हुन्छन् । तर, यता भने प्रतिपिलर १ हजार ७२ रुपैँया प्रतिगोटा पिलर तयार भएको तथ्यांकले देखाउँछ । आम पिल्लरहरु भन्दा दोब्बर ज्यादा लगानीमा निर्माण गरिएका पिल्लरहरुको कसरी हावालेनै भाच्न्ने भए ? जो कोहीले अनुमान गर्न सकिन्छ ।
निर्माण समिति अध्यक्षले पिल्लर निर्माणमा ठेकेदारले लापरवाही गरेको बताएका छन् । धान रोपाईंको समय भएकाले आफूले निरन्तर अनुगमन गर्न नपाएको बताउँदै भट्टराईले सोही मौकाको फाइदा उठाई ठेकेदारले गुणस्तरहिन पिल्लर तयार गरेको बताए । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रकाशपुर गाउँसमिति अध्यक्ष नवराज बस्नेतले समितिको लापरबाहीले यस्तो भएको बताएका छन् । उनले यो योजना सुरु हुँदा नेपाली कांग्रेसको कुनै प्रतिनीधि नराखिनु, पछि विवाद चुलींदै गएपछि एकजनालाई सुटुक्क घरमै दस्तखद गर्न लगाइ नाम मात्रको सहभागिता गराउनुले पनि सो योजनामा अनियमितता भएको बस्नेतले आरोप लगाए । उनले काम सम्पन्ननै नभइ, अनुगमननै नगरी रकम निकाशा हुनुले थप शंका उत्पन्न गराएको बताए ।
स्थानीय समाजसेवी नरेन्द्र बस्नेतले सबैतिरबाट सो योजनाको विषयलाई लिएर खण्डन भइरहेको हुँदा गडवड भएको हुन सकने तर्क राखेका छन् । उनले सबैले सो विषयमा चासो, संवाद र छलफल गरी विवादरहित ढङ्गबाट योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने समेत बताए । बराहक्षेत्र १० नं. वडा अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर खत्रीले सो योजनामा प्रयोग गरिएका पिलरहरु गुणस्तरहिन भएको बताएका छन् । उनले यसरी गुणस्तर हन सामाग्रीको तयार गर्ने र अनियमितता गरेको देखिएमा यो समितिलाई कानुनी दायरामा ल्याइने समेत उनले बताए । खत्रीले थपे यदी अनियमितता भएको देखिएमा समितिलाई हेरफेर गरिने र यो समितिलाई कुनै पनि रकम उपलब्ध नगराइने समेत स्पष्ट पारेका छन् ।
यता सो योजनाको ठेकेदार प्रेमबहादुर बिष्टले आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन् । उनले घरायसी समस्याका कारण २ दिन फिल्डमा आउन नसकेको अवधीमा कामदारहरुले गल्ती गर्नाले गुणस्तरहिन पिलर तयार भएको बताएका छन् । उनले सो गल्ती आफ्नै भएको स्वीकार गर्दै समितिले सिमेन्ट उपलब्ध गराइदिए पुनः निर्माण गर्ने कोशी अनलाइनसँग प्रतिवद्धता समेत गरेका छन् ।